Tafita vao rendrika, rendrika vao tafita… | NewsMada
Tafita vao rendrika, rendrika vao tafita…
Hanao ahoana ny amin’izao fiatrehana ny fifidianana izao? Maro ny manahy korontana sy krizy. Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Aleo sorohina izay loza mety hitranga. Tafita vao rendrika izao famaranana fe-potoam-piasana izao? Izay ela izay, nangina sy tsy nihetsika ny vahoaka: fifidianana tsy andrin’ny hafa, andriny ihany.
Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao vao ahina mafy ny korontana, na efa ao anatin’izany izao. Azo itarafana izany, ohatra, ny fandaniana amboletra ny lalàm-pifidianana teny anivon’ny Antenimierampirenena. Noho ny hoe fisian’ny kolikoly, mahery vaika ny fifanenjanana sy fifanenjehana, fifampiandrasana kendry tohina…
Tafita vao rendrika ny famaranana ny fe-potoam-piasana? Na indray hipoaka amin’ny farany avokoa ny tsy fanjariana sy ny tsy fahombiazana niangona sy niotrika hatramin’izay… Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa sy ny marina. Tsy manao afa-tsy izay hanamafisana fahefana tsinona, hany ka manaotao foana amin’ny farany.
Amin’izany, karazan’ny rendrika vao ho tafita ny vahoaka? Tsy hanaiky lembenana hatrany izay efa niaretany hatramin’izay: tsy azo leferina intsony, mahatofoka… Manomboka ny farany, fotoana hisehoan’ny vahoaka ny tena heviny sy heriny izao? Tsy avy aminy tsinona no mety hiavian’ny korontana, raha sanatria tonga tokoa ny tokoa.
Eo tsinona ny fitompoana teny fantatra, fiheveran-tena ho lehibe tsy meloka ary ny vahoaka ho bado sy zaza… Fantatra ihany ny setroka sy ny tomany, ny lainga sy ny marina, ny fihatsarambelatsihy sy ny firaharahana vahoaka… Miankina amin’izany ny ho tohin’ny raharaha, fa efa nangina sy tsy nihetsika ny vahoaka izay ela izay.
Nandrasana sy nantenaina ny fifidianana, raha anaovana amboletra amin’ny lalàm-pifidianana tsy eken’ny rehetra, fanilihana kandidà, fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana, fividianana olona hanaraka sy hanotrona ny tena, hanao hosoka sy hala-bato… Hanara-davahana sy hanaiky lembenana ve ny vahoaka? Fieritreretana sy fanapahan-kevitra izao.